Yan Aung: ကြေညက်စွာ ၀ါးစားပါ....
သိပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ Post လေးပါပဲ။
လူတိုင်း လူတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်
လေးမွေးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာ ။
ဒါမှ မဟုတ်ရင် ....
ဂဏန်း ပုံးထဲက ဂဏန်း တကောင်လို
ကိုယ် အပေါ် ရောက် ထွက်ချင်တာနဲ့တခြား
အကောင်တွေကို ဖိနင်း တွန်း တက်ကြပြီး
နောက်ဆုံး ဘယ်အကောင်မှ မလွတ်မြောက်ပဲ
သေသွားကြရတာမျိုး နဲ့ဘဝနိဂုံးချုပ်ရမှာ။
ရေးထာတာတွေ ထပ်တူကျလို့ သဘောတူပါတယ်၊ တလောကတောင် ဘာမှမဆိုင်ပဲ လာရန်ထောင်နေလို့ response မလုပ်တဲ့တည်းနဲ့ နေလိုက်မှ ရန်အေး သွားရဖူးတယ်။
ဖတ်ပြီး အပြုံးတစ်ခု လက်ဆောင်ပေးသွားတယ် :-)
ပြီးတော့ ဒီအချိန်မှာ အရေးသင့်ဆုံး Post!
ထောက်ခံပါတယ် ကို ရန်အောင်ရေ ...။
ဒီလိုကိစ္စမျိုးလဲရှိလား? အခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြတာ ကျေးဇူးပါ။ စိတ်အားကျသွားရင်လေ.. အမြဲအားပေးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်း ရှိပါတယ်လို့ သတိရလိုက်ပါနော် :D